Taolagnaro : 10 ny mararin’ny Covid-19 mitsabo tena an-trano - ewa.mg
Taolagnaro : 10 ny mararin’ny Covid-19 mitsabo tena an-trano
News - Santé - Taolagnaro : 10 ny mararin’ny Covid-19 mitsabo tena an-trano
Ny asabotsy lasa teo, na­nomboka
nampiasa ny fitaovam-pitiliana GenExpert momba ny covid-19 ny
teknisianina ao amin’ny distrikan’i Taolagnaro, araka ny
fanazavan’ny talem-paritry ny fahasalamana, omaly. Hatramin’ny
omaly, 37 ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina
Coronavirus, ora iray aty aorian’ny fijerena ny singa nalaina no
mivaly ny fitiliana. Ireo olona efa misy soritr’aretina no
ampiasana ny ny fitaovana GenExpert noho ny antony teknika. Misy
soritr’aretina avokoa izy 37 fa tsy ahitana tranga sarotra kosa. 27
raisina an-tanana eny amin’ny centre manokana fa any an-trano ny 10
ambiny. Misy fanadihadiana mialoha ny fanekena ny fitsaboan-tena
an-trano. Fan­tarina ny toerana misy ilay marary na mitokana na
amin’ny faritra be mponina. Manana efitra maro ve izy ireo
hahazoana mihiboka mitokana ary firy ny olona iray trano.
Arahi-maso isan’andro ireo mijanona an-trano ary manana ekipa ny
fari-piadidiam-pahasalamana misahana izany. Hatra­min’izao, ireo
mpiasan’ny fahasalamana miankina amin’ny fanjakana no mikarakara ny
marary sy ny fitsaboana ary ampy ny fitaovana enti-miasa, hoy ny
Momba ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, hi­verina hiditra
an-tsehatra in­dray ny mpitandro filaminana fa mitady ho goragora
ny fanarahana ireny eny anivon’ny vahoaka. Nisy ny fivoriana
nijerena manokana ny fepetra hanamafisana ny efa mihatra
hatramin’izay noho ny fahamaroan’ny tranga vaovao miseho ao
anatin’ny faritra Anosy.
L’article Taolagnaro : 10 ny mararin’ny Covid-19 mitsabo tena an-trano a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 17/07/2020
Coronavirus - COVID19 - Fahasalamana - Taolagnaro
USAID – Tetikasa « Mahefa Miaraka »: nanatsara ny fahasalamam-bahoaka amin’ireo faritra fito
Nampahafantarina, ny herinandro teo, ny fiafaran’ny tetikasa « Mahefa Miaraka », sahanin’ny USAID. Niasa nandritra ny dimy taona ity tetikasa ity ary nahatsangana rafitra ara-pahasalamana matanjaka ho an’ny fiarahamonina any amin’ny faritra ambanivohitra.Hatramin’ny taona 2016 ny « Mahefa Miaraka » no manohana teknika ny minisiteran’ny Fahasalaman-bahoaka eo amin’ny fanatanterahana ny politika nasionaly momba ny fahasalaman’ny mpiara-belona (PNSC). Voakasik’izany ireo faritra fito: Analanjirofo, i Boeny, i Diana, i Melaky, i Menabe, Sava ary i Sofia.Nitentina 31 tapitrisa dolara ny vola novatsin’ny governemanta amerikanina amin’ny alalan’ny USAID an’ny Mahefa Miaraka tao anatin’ny dimy taona.Nanamafisana ny fandrindrana, ny fanatanterahana ary ny fitantanana ny asa fahasalamana ho an’ny vahoaka malagasy.Nifantoka amin’ny fanatsarana ny fandrindram-piterahana, ny fampihenana ny fangerena ankalamanjana, ny fisorohana ny fanambadiana aloha loatra an’ny ankizy ary amin’ny fanomezana asa fahasalamana ho an’ireo vehivavy bevohoka, ny tera-bao sy ny ankizikely ny tetikasa.Nanampy ny governemanta nanavao ny politikam-pirenena momba ny fahasalamana ary nampihatra torolalana vaovao mikasika ny fahasalamana. Anisan’izany ny fanomezana fitsaboana ho an’ny rehetra sy ny drafitra stratejika nasionaly ho fanamafisana ny fahasalaman’ny mpiara-belona mandritra ny 2019-2030.Nanangana komity mpandrindra ny fahasalamana sy ny fampandrosoana miisa 5 205 ihany koa ary nanofana sy nampitaovana ny mpanentana fahasalamana efa ho 10 000. Nahazo tombony ireo mpanentana fahasalamanaAnkoatra izany ny nanofana mpanentana fahasalamana maherin’ny 9 500 amin’ny fitsaboana ny zaza sy nanome fitsaboana fananahana sy fandrindram-piterahana ho an’ny reny sy ny tanora ny tetikasa Mahefa Miaraka.Nitsabo aretina tazomoka maherin’ny 377 000 teo amin’ny zaza latsaky ny dimy taona, nizaha ny fahasalamana ara-tsakafon’ny zaza latsaky ny dimy taona miisa 1 112 000, ary nandefa mararin’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika miisa 13 435 any amin’ny tobim-pahasalamana mba hotsaboina.Miisa 2,5 tapitrisa ankehitriny ny mpiara-monina mahazo torohay sy fanabeazana avy amin’ireo mpanentana fahasalamana ireo.Tatiana AL’article USAID – Tetikasa « Mahefa Miaraka »: nanatsara ny fahasalamam-bahoaka amin’ireo faritra fito a été récupéré chez Newsmada.
Toe-draharaham-pirenena : «Aoka ho tony isika vahoaka» hoy ny AKFM
“Misy ireo minia tsy te hahalala na manokorontana, ao ny manao hitsin-dalana tsy te hanatanteraka ny ezaka sy ny tanjona tian-kotratrarina ary vao mainka aza mampilentika lalina ny fiainam-bahoaka sy ny firenena” hoy ny birao politikan’ny antoko AKFM. Fantatra fa misy ny mpanohana sy ny mpampirisika avy any ivelany ny hetsika amin’izany, ary manao ho tarigetra ny fandrodanana ny fitondrana mijoro sy voafidy ara-pomba demokratika izay manao azy. Mitaona ny vahoaka tsy ho tratran’ny vela-pandriky ny mpanakorontana mba ho tony ary hiaro ny fanjakana nanehoany ny safidiny àry ny antoko. Be ny misora-tena ho tia tanindrazana. Tsy ireny na izay mampidera vola no handrabiraby na hoenti-manimba ny fiarahamonina no mendrika hitarika fa ireo sahy manetry tena ka mikatsaka mandrakariva ny hahasoa ny mpiara-belona ahazoana miasa sy miaina amim-pitoniana ary ao anatin’ny fahamarinana tanteraka. Marina fa mandalo fahasahiranana ny vahoaka, vokatry ny Covid-19. Eo koa ny kere, ireo very asa, nivaro-pananana, indrindra ireo nandao ny toeram-ponenany. “Tsapa anefa fa manao ny ezaka ho fanarenana ireny ny tomponandraiki-panjakana ankehitriny”, hoy ny fanambarana. Tsy ho vita ao anatin’ny fotoana fohy ny fanarenana. Mila faharetana sy fiaraha-mientana izany.R. Nd.L’article Toe-draharaham-pirenena : «Aoka ho tony isika vahoaka» hoy ny AKFM a été récupéré chez Newsmada.
Alakamisy 8 aprily: 11 no matin’ny covid19
Araka ny salanisa navoakan’ny CCO isan’andro, na­ha­tratra 11 indray ireo olona ma­tin’ny covid-19 tao anatin’ ny iray andro, ny alakamisy 8 avrily teo. 559 kosa ny tranga vaovao tao anatin’ireo 1.730 nanaovana fitiliana.Eto Analamanga avokoa ny 439 amin’ireo mitondra ny tsimokaretina ireo. Efa mi­ho­a­tra an’io isa io anefa ny mi­tondra izany, saingy tsy mandalo fitiliana ary tsy maneho soritr’aretina mandehandeha eny rehetra eny ary mamindra ihany koa. Nampitomboina, araka iza­­ny, ny fanaovana fitiliana ka nahazoana ireo vokatra ireo. Ny eny amin’ny CSB sy ny any an-trano kosa tsy mandalo fitiliana ka tsy tafiditra anatin’io tarehimarika io.Raha ny totalin’ny nodimandry nandritra ny nisian’ny valanaretina teto Madagasi­ka­ra dia nahatratra 486. Mi­ha­ma­fy ny aretina ary mamono ha­ingana raha vao tonga amin’ny tranga fahasarotana. Raha ny antontan’isa ha­tra­ny, miisa 288 ireo marary maneho tranga fahasarotana an­kehitriny. 3.251 kosa no ma­naraka fitsaboana eo ambany fanaraha-mason’ny doko­te­­ra eny amin’ireo hopitaly sy CTC sy ny CSB manerana ny Nosy.Tatiana AL’article Alakamisy 8 aprily: 11 no matin’ny covid19 a été récupéré chez Newsmada.
« Salon de l’orientation »: karohina ny sampam-pianarana ambony horantovina
Natao teny amin’ny oniversite Ankatso, ny zoma 1 oktobra teo, ny hetsika « Salon de l’orientation ». Nikarakara azy ny sekoly ambony ho an’ny fitantanana (Ecole supérieur de management). Nilaza ny talen’ny fanomezan-dalana sy ny fisian’ny kalitao azo antoka, ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny fikarohana siantifika (Mesupres), Rakotozafy Rivo, nanome voninahitra ny fotoana, fa zava-dehibe ny hetsika toy izao, satria maro amin’ireo mpianatra manana bakalorea no tsy mbola mahalala ny sampam-pianarana horantoviny.Nomarihiny fa miahy ny fampianarana ambony tantanin’ny fanjakana sy ny tsy miankina ny minisiteran’ny Fampianarana ambony. Paikady napetraky ny filoham-pirenena ny fanitarana ny oniversite any amin’ny faritra, ankoatra ny faritany enina. Toy ny any Itasy, Vakinankaratra, Analanjirofo, Menabe, Sofia, Sava, Anosy, miampy ny Ivontoerana ambony teknolojia (IST) telo.Maherin’ny 200 kosa ny sekoly ambony tsy miankina manerana ny Nosy. Ny minisitera no manome ny fahazoan-dalana hisokatra (habilitation), ary herintaona aorian’izay vao omena ny fanomezan-dalana hanofana. Ahari-maso akaiky sy ifotony ny lafiny fotodrafitrasa, ny fari-pahalalan’ny mpampianatra, sns.Njaka A.L’article « Salon de l’orientation »: karohina ny sampam-pianarana ambony horantovina a été récupéré chez Newsmada.
Fifaninanana “Ndao Zandrikely”: norombahin’ny CAI Ambodin’Isotry ny amboara
Nandritra ny hetsika karakarain’ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ho fanomezan-danja ny tontolon’ny fanatanjahantena sy hampivelarana ireo katitakely, norombahin’ny solontenan’ny boriborintany voalohany ny amboara anatin’ny hetsika “Ndao zandrikely” tetsy amin’ny gymnase Mahamasina, omaly. Lavon’ireo zandrikely avy etsy Ambodin’Isotry tamin’ny isa 3 no ho 1 ny solontenan’ny boriboritany fahadimy, teo amin’ny lalao famaranana. Miisa 12 ireo mpandray anjara tamin’ny fifaninanana ary ekipa telo mendrika indrindra no nisitraka ny amboara. Mbola hitohy moa ny hetsika, raha ny nambaran’ny eo anivon’ny mpikarakara ary tanjona hatrany ny hanatontosana ny vinan’ny Ben’ny Tanonan’Antananarivo Renivohitra dia ny hampiroboroboana ny fanatanjahantena.Tsiferana R.L’article Fifaninanana “Ndao Zandrikely”: norombahin’ny CAI Ambodin’Isotry ny amboara a été récupéré chez Newsmada.
Marofangady -Arivonimamo: misy aretina mahazo ny omby
Misy trangan’aretina, ankehitriny, mahazo ny omby, mbola tsy fahita hatramin’izay ao amin’ny kaominina Marofangady, distrikan’Arivonimamo. Mitaraina ireo mponina ary miantso ny tomponandraikitra mba hijery izany akaiky fa mijaly izy ireo. Malain-komana ilay biby, tsy misakafo, tsy misotro rano, mihamahia, ary mety hiafara amin’ny fahatesanaRehefa jerena ny lelany, feno bibikely mandrakotra azy ka ezahin’ny tantsaha alàna ilay izy fa mitombo hatrany. Rehefa maty ilay omby dia mivonto be ny fony ary tsy ara-dalàna ny taovany. Mifindra sy mahazo ny omby maromaro izy io, ankehitriny. Loza sy fahasahiranana iainan’ireo tantsaha manana omby any an-toerana, satria miteraka fatiantoka ho azy ireo izany. Ny fatiantoka eo ihany, fa ny atahorana sao hifindra amin’ny olombelona ihany koa.Koa manao antso avo sy mitaraina amin’ny tomponandraikitra rehetra ireo mponina mba hijerena izany haingana. Tsy ny omby ihany fa rehefa biby fiompiana amin’ny ankapobeny manerana ny Nosy. R.MathieuL’article Marofangady -Arivonimamo: misy aretina mahazo ny omby a été récupéré chez Newsmada.
Kolontsaina sy politika – Japon sy Madagasikara: notolorana mari-boninahitra i Mireille Rakotomalala
Afa-po amin’ny fiaraha-miasan’i Madagasikara sy Japon ry zareo Japoney. Tsy tongatonga ho azy anefa izany fa anisan’ny angady nananana sy vy nahitana, i Mireille Rakotomalala…Fiaraha-miasan’i Japon sy i Madagasikara. Anarana tsy ho voakosika eo amin’ny tantara, tsy ho voafafan’ny vanim-potoana ,ny an’i Mireille Rakotomalala. Ny fahatsapana ireo ezaka lehibe vitany, notoloran’ny fitondram-panjakana japoney mari-boninahitra « Ordre du soleil levant, Etoile d’or et d’argent » ity oloben’ny kolontsaina ity. Lanonana notontosaina teny Ivandry, omaly. Fotoana nampahatsiahivan’ny masoivohon’i Japon, i Higuchi, ny anjara biriky lehibe nentin’i Mireille Rakotomalala eo amin’ny fanatsarana sy ny fanatevenana ny fifandraisan’i Japon sy i Madagasikara, indrindra eo amin’ny lafiny kolontsaina sy ny politika.Nomarihiny tamin’izany fa tamin’ireo toerana sy andraikitra rehetra nosahaniny, tazana hatrany ny ezaka ataon’i Mireille Rakotomalala ho fampiroboroboana io fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta io. Anisan’izany ny tamin’ny fotoana naha masoivohon’i Madagasikara tany Japon (Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar au Japon) azy. Nandritra ny naha minisitry ny Kolontsaina azy ka namolavolana ny fanatanterahana ny « Projet de création d’un atelier de restauration d’oeuvres d’art et d’un atelier d’ébénisterie pour les collections du Palais de la Reine » ny taona 2015.Ankoatra izay, notsiahivina teny an-toerana ihany koa ireo asa sy ny andraikitra marobe sahaniny any anivon’ireo fikambanana samihafa ifamatoran’ny fiaraha-miasan’i Japon sy i Madagasikara. Anisan’izany ny « Association des anciens et amis du Japon à Madagascar ». Fikambanana mirotsaka amin’ny sehatry ny toekarena sy kolontsaina ary sosialy eo amin’ny roa tonta. Filoha mpanorina ny « Association de jeu de GO de Madagascar » izy nanomboka ny taona 1991. Ny taona 2018, filoham-boninahitr’ity fikambanana ity.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article Kolontsaina sy politika – Japon sy Madagasikara: notolorana mari-boninahitra i Mireille Rakotomalala a été récupéré chez Newsmada.
Fi.Mpi.Ma 58 taona : raikitra ny “Zaha tany, Zara kolontsaina hamakivaky an’Ankaratra”
Mandia ny faha-58 taonany ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany na ny Fi.Mpi.Ma. Tsy ho lalovam-potsiny io vanim-potoana io fa hanatontosana hetsika kolon­tsaina lehibe. Anisan’izany ny “Zaha tany, Zara kolontsaina hamakivaky an’Ankaratra”, hotanterahinany 19 novambra ka hatramin’ny 21novambra izao. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ny fitsan­gantsanganana, fitsidihana toerana manan-tantara, takarivan’ny mpikabaray, kitono­tono sy kiteniteny. Ny zoma 19 novambra maraina, hisy ny famoahana mpianatra, fanasaloran-damba Fi.Mpi.Ma, fianianan’ny filohan-tsampana Antsirabe sy Toliara, fanolorana mari-pankasitrahana… Lalao fanatanjahantena ny tolakandro. Arahina “Takarivan’ny mpikabary, ahitana fiaraha-misa­kafo omban-korana sy kitanitany sy kitonotono. Ny asabotsy maraina, fizahan-tany ao Antsirabe, ho an’ny rehetra, raha hanatanteraka atrikasan’ny fampianarana kosa ny Fi.Mpi.Ma. Ny hariva, fivorian’ ny filoha rehetra eo anivon’ny Fi.Mpi.Ma sy ny Antenimiera foibe hanapahanany tetikasa taona 2022. Alahady 21 no­vambra, fitsidihana toerana manan-tantara ho an’ny Fi.Mpi.Ma. Tanjona ao amin’izao hetsika izao ny hananan’ny mpikabary fahalalana bebe kokoa hatrany amin’ireo kolontsaina isan-karazany. Manampy amin’ ny kabary ataony ny fananana izay kolontsaina mivelatra izay.HaRy RazafindrakotoL’article Fi.Mpi.Ma 58 taona : raikitra ny “Zaha tany, Zara kolontsaina hamakivaky an’Ankaratra” a été récupéré chez Newsmada.